Umbala wokwenza isilinda egobileyo yelanga
Amandla: iilitha ezingama-20
Intloko yeshawari: intloko yeshawari ejikelezayo
Imilinganiselo: malunga. 214 x 11.5 x 11.5 cm
Imilinganiselo yepleyiti esezantsi: 15 x 15 x 0,7 cm
Ubunzima bomzimba: malunga. 6.0 kg
Umba Ukupakisha 40'HQ Ubunzima Ubungakanani bebhokisi yangaphandle (cm)
I-KR-11 Ibhokisi ibhokisi 900 7.5 6.0 1.00 113.50 40.00 16.50
Ngokungafaniyo neshawa yangaphakathi, ishawari yangaphandle yelanga inokufakwa ngokulula ngaphandle kokudiliza udonga kunye nokubhola. Ingasetyenziselwa kwiigadi, iilwandle kunye namachibi. Emva kokubhukuda, abasebenzisi abanakuphinda baye kwigumbi lokuhlambela ukuze bahlambe kodwa basebenzise amanzi ashushu kule ishawa ngokuthe ngqo ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo.
Le shawa inenxalenye ephambili kunye nezinto ezimbalwa, ezenza kube lula ukudibana. Yidibanise nje nombhobho oqhelekileyo wegadi kwaye uyifake kumgangatho othe tyaba. Ukuba awukaqhelani nofakelo lwayo, sonwabile ukuxhasa ividiyo efundisayo ukubonisa inkqubo.
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Sizimisele ukusebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu ukuqinisekisa ubomi benkonzo yemveliso. Yiyo loo nto singcono kuneontanga zethu.
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Tube eyenziwe ngezinto ezikhethekileyo ifunxa amandla elanga, iwuguqula ube bubushushu, kwaye ifudumeza amanzi ngaphakathi kubushushu obumalunga ne-60 ℃. Ke ngoko, akukho mfuneko yeengcingo kunye neebhetri, ukugcina amandla ngokufanelekileyo.
\_ Intloko yeshawa eguqukayo inokujongwa ngokwendlela yokuhlamba kwabantu nokuphakama. Uyilo lomntu luhlangabezana neemfuno zokuhlamba zamaqela ahlukeneyo, okwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Ngokungafaniyo nekholamu yesiqhelo yokuhlambela ngokuthe ngqo, indawo ephezulu yale kholamu yeshawari ijonge phambili. Ukuthambeka okuhle akwenzeli kuphela inoveli kunye nembonakalo entle, kodwa kukwenzela amava eshawa angcono.
Isilinda yimveliso eguquguqukayo. Nokuba kungasetyenziswa kwesiphi isiganeko, ihlala ilungelelaniswa, hayi ngokukhawuleza. Kwaye kubonisa ubuhle obuthambileyo.
Egqithileyo Ukuhlanjwa kwesiqingatha selanga
Okulandelayo: Imilo ethe tyaba ezantsi